10 ကမ္ဘာတစ် ၀ န်းရာသီခရီးသွားနေရာများ | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား > 10 ကမ္ဘာတစ် ၀ န်းရာသီခရီးသွားနေရာများ
မင်းရဲ့ပခုံးကိုလှည့်ကြည့်ပြီးချစ်စရာကောင်းတဲ့ကော်ဖီဆိုင်လေးကို ၀ င်ကြည့်တဲ့ခရီးသွားဧည့်သည်တွေမပါဘဲဒေသခံတွေကိုသိအောင်လုပ်ပါ, ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိဤရာသီခရီးသွားနေရာများသည်မမေ့နိုင်သောအားလပ်ရက်များအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်.
1. ရာသီအလိုက်ခရီးသွားနေရာများ: အောက်တိုဘာလတွင်အိုင်ယာလန်
ရွှေဖြင့်တန်ဆာဆင်ထားသည်, ကြည်လင်သောလေ, Wicklow တောင်တန်းများ၏အိုင်းရစ်သဘာဝအလှအပ, Dublin မှခဏမောင်းရုံဖြင့်လှပသောသန့်ရှင်းရာဌာနတစ်ခုကိုသင်ရောက်လိမ့်မည်. ဒီမှာ, မည်သည့်တောင်တက်လမ်းသည်သင့်အားအံ့သြဖွယ်ကောင်းသောရေတံခွန်များသို့ပို့ဆောင်သည်, မော်ကွန်းအမြင်များ, အပြာရောင်ကောင်းကင်သို့မဟုတ် Glendalough ချိုင့်ဝှမ်းနှင့် ၆ ရာစုအလယ်ခေတ်ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းအခြေချ.
မြေထဲပင်လယ်၌နှစ်ခြင်း, truffles ကိုရွေးသည်, နှင့်အလွန်ကောင်းမွန်သောကြွေကျသစ်ရွက်, အီတလီသည်ဧပြီလတွင်ရာသီအပန်းဖြေခရီးသွားနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်. နွေ ဦး ရာသီသည်အီတလီသို့လည်ပတ်ရန်အကောင်းဆုံးအချိန်ဖြစ်သည်, စိုထိုင်းဆ, စျေးနှုန်းများ, နှင့်လူ ဦး ရေလျော့နည်းသွားသည်.
လူတိုင်းသည် Amalfi ကမ်းခြေ၌အပန်းဖြေချင်သည်, သို့မဟုတ် Tuscany ရှိစပျစ်ပင်များကြားတွင်. သို့သျောလညျး, နွေရာသီတွင်စျေးကြီးပြီးလူစည်ကားသည်, အထွတ်အထိပ်ရာသီ. ဒါကြောင့်, ဧပြီလတွင်အီတလီရာသီအားလပ်ရက်ခရီးသည်ခရီးသွားရန်အကောင်းဆုံးအချိန်ဖြစ်သည်.
3. ရာသီအလိုက်ခရီးသွားနေရာများ: စက်တင်ဘာလလယ်တွင်ပြင်သစ်နိုင်ငံ Loire Valley
ဆောင်း ဦး ဒေလီယာပွင့်သည်, လတ်ဆတ်သောတောင်လေ, ဆောင်း ဦး ရာသီသစ်ရွက်, ပူပြင်းသောနေ့များတွင်လေပြင်းတိုက်ခတ်သည်, ရာသီ၏ Loire ချိုင့်ကိုအကြွင်းမဲ့အိပ်မက်ကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်. ဆွဲဆောင်မှုရှိသောပြင်သစ်ကျေးလက်ဒေသသည်ဝိုင်ဖြူကြောင့်နာမည်ကြီးသည်, ရိတ်သိမ်းချိန်သည်စက်တင်ဘာလလယ်တွင်စတင်လေ့ရှိသည်.
ဒါကြောင့်, Loire သို့ခရီးသွားရန်အကောင်းဆုံးအချိန်သည်စက်တင်ဘာလဖြစ်သည်, high season ရဲ့အဆုံး. မင်းက Chateau de Chaumont Garden ပွဲတော်ကိုသွားလိမ့်မယ်, Chateau de la Bourdaisiere တွင်ခရမ်းချဉ်သီးပွဲတော်, နှင့် Festivini Fontevraud Abbey တွင်ကြီးကျယ်ခမ်းနားသောပွဲတော်နှင့်အတူ. အေးမြသောဂူများတွင်မှိုကောက်သည်, (သို့) အပူချိန်ကျဆင်းလျှင်တောင်တက်ခြင်း, ဒါပေမယ့်နေ့တွေကနေ့အလင်းရောင်အများကြီးနဲ့ရှည်လျားနေဆဲ – Loire Valley သည်စက်တင်ဘာလတွင်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောရာသီမရွေးခရီးဖြစ်သည်.
4. ဂျာမနီနိုင်ငံတွင်ရာသီအလိုက်အကောင်းဆုံးခရီးသွားနေရာ: စက်တင်ဘာ-အောက်တိုဘာလတွင်မြူးနစ်
နာမည်လွဲမှားနေသော်လည်း, ကြီးကျယ်သောဘီယာပွဲတော်သည်စက်တင်ဘာလတွင်စတင်သည်. Oktoberfest သည်ဂျာမနီသို့ခရီးသွားရန်အံ့သြဖွယ်အကြောင်းပြချက်တစ်ခုဖြစ်သည်, နှင့်၎င်း၏မူလနေရပ်သို့, မြူးနစ်. ဤအချိန်အတောအတွင်း, မင်းမြို့ကိုလှုပ်လှုပ်ရွရွနဲ့မြူးနစ်မှာအရမ်းကောင်းတဲ့ခံစားချက်တွေရှိတယ်.
ဤအရာသည်သင်ခရီးသွားများကို ၀ န်းရံရန်အဖြစ်နိုင်ဆုံးဟုဆိုလိုသည်, ရာသီမမြင့်ပေမဲ့. ၎င်းသည်စက်တင်ဘာလ၌မြူးနစ်ရာသီသို့ခရီးသွားရန်ထိုက်တန်သေးသည်, Oktoberfest ၏မှော်ကိုတွေ့ကြုံခံစားရန်အတွက်.
5. တရုတ်နိုင်ငံတွင်ရာသီအလိုက်ခရီးသွားနေရာ: နိုဝင်ဘာလတွင်ရှန်ဟိုင်း
လူ ဦး ရေနှင့် 26 လူသန်း, ရှန်ဟိုင်းရှိလူအုပ်ထဲတွင်သင်အမြဲတွေ့လိမ့်မည်. သို့သျောလညျး, ရာသီအလိုက်ရှန်ဟိုင်းသို့ခရီးသွားခြင်းသည်ခရီးသွားများသည်၎င်းတို့၏အိမ်မှပြန်လာခြင်းဖြစ်သည် နွေရာသီအားလပ်ရက်, ဒါကြောင့်မင်းကဒေသခံတွေနဲ့ရောနေလိမ့်မယ်.
ထို့အပြင်, ရှန်ဟိုင်းမြို့၏ရာသီဥတုသည်ပူနွေးပြီးစိုထိုင်းဆမြင့်တက်လာသည်, ဒါကြောင့်ရာသီမရွေးခရီးထွက်ပြီးနိုဝင်ဘာလမှာရှန်ဟိုင်းရဲ့မိုးကောင်းကင်တွေကိုလေးစားဖို့အကြောင်းပြချက်ကပိုများတယ်. အောက်တိုဘာလ-နိုဝင်ဘာလသည်ရှန်ဟိုင်းတွင်စိုထိုင်းဆရာသီဖြစ်သည်, နေရာထိုင်ခင်း, နှင့်လူအုပ်ကျဆင်းသွားသည်. ဤနည်းအားဖြင့်သင်စိတ်လှုပ်ရှား။ အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောမြို့မှဤထက်ပိုပြီးအကျိုးကျေးဇူးရလိမ့်မည်.
6. ကမ္ဘာတစ် ၀ န်းရာသီခရီးသွားနေရာများ: စက်တင်ဘာလ Andalusia စပိန်
နေ့တိုင်းနီးပါး fiesta နှင့်ပွဲတော်တစ်ခုနှင့်အတူ, လှပပြီးစွဲမက်ဖွယ်ကောင်းသော Andalusia ဒေသသည်စက်တင်ဘာလတွင်အိပ်မက်တစ်ခုဖြစ်သည်. စပျစ်ဝိုင်ရိတ်သိမ်းပွဲတော်မှပင်လယ်စာနှင့်ကမ်းခြေတွင်အသားလောင်ခြင်း - စက်တင်ဘာလနှောင်းပိုင်းသည် Andalusia သို့လည်ပတ်ရန်အကောင်းဆုံးအချိန်ဖြစ်သည်.
သြဂုတ်လမှစက်တင်ဘာလအစောပိုင်းအထိအလွန်နွေးထွေးနေဆဲဖြစ်သည်, စက်တင်ဘာလနှောင်းပိုင်းတွင်မိုးရွာရန်အလားအလာရှိနိုင်သည်, နေသာသောကမ်းခြေ-ပြီးပြည့်စုံသောနေ့များ, သို့သော်လှပသော Andalusian မြို့များတစ်ဝိုက်တွင်သင်အသက်မရှူနိုင်၊ လမ်းလျှောက်နိုင်သည့်အတိုင်းအတာအထိလည်းမရပေ. ပူအိုက်တဲ့နေ့တွေမှာဆေးလိပ်သောက်တယ်. ထိုကွောငျ့, Andalusia သည်စက်တင်ဘာလနှောင်းပိုင်းတွင်စပိန်၌ပြီးပြည့်စုံသောရာသီပိတ်ရက်ဖြစ်သည်.
7. စက်တင်ဘာလလယ်တွင် Algarve ပေါ်တူဂီ
Algarve သည်တစ်နှစ်ပတ်လုံးအံ့မခန်းဖြစ်သည်, ဒါကြောင့်လည်ပတ်ဖို့မကောင်းတဲ့အချိန်မရှိဘူး. ပေါ်တူဂီနိုင်ငံ၏လှပသောကမ်းခြေများပေါ်တွင်ရေကူးခြင်းနှင့်အပန်းဖြေခြင်းတို့အတွက်ဖြစ်သည်, အတ္တလန္တိတ်သမုဒ္ဒရာကမ်းခြေကိုပိုင်ဆိုင်ထားပြီးအရာအားလုံးကိုသင်ကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်ပါ, စက်တင်ဘာလလယ်သည် Algarve သို့လည်ပတ်ရန်အကောင်းဆုံးအချိန်ဖြစ်သည်.
နွေရာသီသည်အပူဆုံးဖြစ်သည်, ၎င်းသည်အစည်ကားဆုံးလည်းဖြစ်သည်, နှင့်ဆောင်းရာသီ၌, ကမ္ဘာပေါ်ရှိ surfers များအတွက်အကောင်းဆုံးသောနေရာများတစ်ဝိုက်တွင် surfers များစွာကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်. ထိုကွောငျ့, Algarve သည်စက်တင်ဘာလလယ်ရာသီအတွက်အကောင်းဆုံးရာသီဖြစ်သည်. အံ့မခန်းတောတောင်များကိုခံစားရန်ရှားပါးသောအခွင့်အရေးကိုသင်ရရှိလိမ့်မည်, ချောက်ကမ်းပါးများ, ကမ်းခြေတစ်လျှောက်နှင့်တံငါရွာများ.
Street Viennese အစားအစာ, ဝိုင်, ဂျင်, သို့မဟုတ်သင်ကြိုက်နှစ်သက်ရာကော့တေးသည်စက်တင်ဘာလတွင်ဗီယင်နာသို့သွားရန်အံ့သြဖွယ်အကြောင်းများဖြစ်သည်. နွေရာသီကကုန်ခါနီးနေပြီ, ခရီးသွားဧည့်သည်များနှင့်အတူ, ဒါပေမယ့်ဗီယန်နီယန်တွေကမြို့ကိုပြန်ရောက်ပြီးကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့ပွဲတော်တွေရှိတယ်.
ထိုကွောငျ့, ဗီယင်နာသည်ထိပ်တန်းတစ်ခုဖြစ်သည် 10 ဥရောပ၌ရာသီအလိုက်ခရီးသွားနေရာများ. စပျစ်ဥယျာဉ်များ၌လမ်းလျှောက်ခရီးသွားခြင်းကိုများစွာသောပွဲများထဲမှတစ်ခုနှင့်ကျင်းပခြင်းသို့ရွေးချယ်နိုင်သည် စက်တင်ဘာလ၌သာဗီယင်နာ၌ကျင်းပသောပွဲတော်များ ဒေသခံများအတွက်သာဖြစ်သည်. သြစတြီးယားအစားအစာများကိုခံစားရန်ပိုကောင်းသည့်နည်းလမ်းမရှိပါ, ယဉျကြေးမှု, ဒေသခံများနှင့်ပေါင်းသင်းခြင်းထက်ဗီယင်နာ၏အလှတရား.
ရှုခင်းသည်ဆောင်း ဦး ရာသီအရောင်များမပြောင်းလဲမီနှင့်သူတို့၏နှင်းဖုံးအဖြူရောင် ၀ တ်စုံများကိုဝတ်ထားသည်, အဆိုပါ ဆွစ်ဇာလန်အဲလ်ပ်တောင်တန်း မှော်ဆန်သောရာသီဖြစ်သည်. ခရီးသွားအများစုသည်အိမ်ပြန်ပြီးနောက်ချက်ချင်းဆိုသလို, Swiss Alps သည်သူတို့၏ငြိမ်းချမ်းသောမှော်ကိုပြန်လည်တည်ဆောက်သည်, အတွက်အခန်းပြင်ဆင်ခြင်း ပြင်ပလှုပ်ရှားမှုများ နှင့်ပျော်ပွဲစား.
ထိုကွောငျ့, Swiss Alps သည်စက်တင်ဘာလတွင်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောရာသီအလိုက်ခရီးသွားနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်. ရာသီဥတုကပူတယ်, ကြည်လင်သောကောင်းကင်ပြာနှင့်တောင်တက်ခြင်းကိုခံစားနိုင်သည်, စက်ဘီးစီးခြင်း, စိတ်အပန်းဖြေပြီးလှပတဲ့ရှုခင်းတွေကိုစူးစမ်းလေ့လာပါ. ဒါကြောင့်, သင်တောင်မှတစ်ခုကိုတက်နိုင်သည် ဥရောပရဲ့အလှပဆုံးတောင်တွေ Jungfrau.
10. ကမ္ဘာတစ် ၀ န်းရာသီခရီးသွားနေရာများ: ဒီဇင်ဘာ၊ ပါရီ
Champs-Alyeese တစ်လျှောက်လမ်းလျှောက်, ခရီးသွားဧည့်သည်များမပါဘဲ Louvre သို့ Tuileries ဥယျာဉ်မှတဆင့် Paris သည်ထူးခြားသောအတွေ့အကြုံဖြစ်သည်. ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားအများဆုံးမြို့တစ်မြို့ကိုအေးအေးလူလူဖြတ်သန်းနိုင်တဲ့အခါပါရီရာသီကပိုလို့တောင်ရင်ခုန်စရာကောင်းပါတယ်, နေရာတိုင်းမှာခရီးသွားတွေမရှိ. နွေရာသီသည်အကောင်းဆုံးရာသီဥတုနှင့်နေသာသောနေ့ရက်များကိုပေးသည်, ဒီဇင်ဘာသည်ပါရီအားလပ်ရက်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်.
ဒီဇင်ဘာ၌ရာသီမရွေးဘဲရစ်သို့ခရီးသွားခြင်းသည်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောမြင်ကွင်းများကိုပေးသည်. ဖြည့်စွက်ကာ, လူများစွာကိုပေါက်ကွဲစေနိုင်တယ် ခရစ်စမတ်စျေးကွက်များ.
ဤတွင်မှာ တစ်ဦးကရထား Save, ငါတို့သည်သင်၏စိတ်ကူးယဉ်နေရာများသို့ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိဤစိတ်ကူးယဉ်နေရာများသို့သင်၏ရာသီမလပ်ခရီးကိုစီစဉ်ရန်ကူညီလိမ့်မည်.
ကျွန်ုပ်တို့၏ဘလော့ဂ်ပို့စ်ကို“ ကမ္ဘာတစ် ၀ န်းရာသီခရီးသွားနေရာ ၁၀ နေရာ” ကိုသင်၏ site ပေါ်တွင်တင်လိုပါသလား? သင်ဟာတစ်ခုခုကိုလုပ်နိုင်အယူကျွန်ုပ်တို့၏ဓါတ်ပုံများနှင့်စာပေးပြီးခရက်ဒစ်နှင့်အတူချိတ်ဆက်ဖို့ဒီဘလော့ပို့စ်. သို့မဟုတ်ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fmy%2Foff-season-travel-locations%2F- (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)